Na-agaghị na-ekwu okwu Gigs N'ihi na Gị Online Ọnọ | Martech Zone
Sunday, Eprel 19, 2015 Monday, April 20, 2015 Douglas Karr
N'oge m na ngosi na Saturday ka Spetù Na-ekwu Okwu Mba, M na-akọrọ a ngosi na-akwado data maka ọkà okwu ịghọta ihe mere a ọdịnaya na-elekọta mmadụ atụmatụ bụ isi ihe na mgbalị ha onwe ha na-ewu ikike na ịchọta ohere ikwu okwu. Ọ bụ otu dị ịtụnanya ịgwa okwu ebe ọ bụ na ha na-enye m uru dị ukwuu na nzaghachi na ikwu okwu m ka m na-enye ha n'ịkwalite nke ha. Ana m ekele gị nke ukwuu Aha ya bụ Karl Ahlrichs maka ohere, ya onwe ya bụ onye ndu na-ekwu maka isi obodo mmadụ na ahụike.
Ọtụtụ ndị na-ekwu okwu ihu ọha na-abịa ohere site na nyocha maka ndị ọkà okwu na ndị na-ekwu okwu na NSA weebụsaịtị. Oge ndị ọzọ na-abịa site n'okwu ọnụ. Maka ebumnuche ndị a, enwere obi abụọ banyere ịdị ike nke ọdịnaya na mgbasa ozi mmekọrịta maka ọtụtụ ndị ọkachamara ndị a nọ na sekit ọtụtụ afọ.
Ọ bụ eziokwu na enwere ike ịchọta ha na saịtị ndị a, ma ha nwere aha ma ọ bụ na ha enweghị ikike dị n'ịntanetị dị oke mkpa iji mechie ohere n'ịntanetị. Ọ bụrụ na m ga-etinye ego puku kwuru puku ma ọ bụ iri puku kwuru iri na ego ị ga-eji kwuo okwu n’ikwu okwu n’ihu ọha, kedụ ihe ị chere ohere ga-abụ bụ na ndị na -achị ihe omume ma ọ bụ azụmaahịa ga-eme nyocha ọnụnọ gị n'ịntanetị maka vidiyo na iche echiche ndị isi na-akọrọ site na weebụ?
Ọ bụrụ na ị bụ ọkà okwu ihu ọha na asọmpi gị ka edeziri okwu ha na Youtube, usoro ndepụta na Wall Street Journal, yana ebe nrụọrụ weebụ mara mma ebe ha na-ejikwa kalenda na-arụ ọrụ yana ọba akwụkwọ nke akụ - kedu ihe ị na-eme chee na ohere gi bu ikwu okwu na ihe omume a ma oburu na inaghi otu? Echere m na ị na-atụfu ọtụtụ ohere.
Eresighi otu ọkà okwu kwuru. O kwupụtara nchegbu ya na ọ bụ naanị ihe nzuzu dị na ya ka ọ chọtara mgbe ọ ga-achọ ọdịnaya ga-abara ndị na-ege ya ntị uru. Agwara m ya na m chọrọ ka ọ bụrụ eziokwu banyere ụlọ ọrụ m, ebe enwere asọmpi na-enweghị atụ na ndị ọrụ ibe m na-ekerịta ozi dị ịtụnanya. Ọ dị m ka ya bụrụ na m nọ na ụlọ ọrụ na-enweghị ọdịnaya ọdịnaya dị n'ịntanetị… n'ihi na m ga-arụ ọrụ na-achị ahịa ahụ! Nke ahụ abụghị nsogbu… ọ bụ ohere.
Na ọkara ụbọchị ihe omume, anyị jere ije na mpaghara nke iwulite mgbasa ozi mgbasa ozi gị na ikike gị n'ịntanetị. Ọ bụ usoro a kwadoro:
Anọ Stage nke Iwuli Online Authority
Advocacy - gee ntị, zaghachi ma zute ndị isi na ụlọ ọrụ gị yana atụmanya ị na-achọ ijikọ. Chee echiche banyere nanị ịmalite mkparịta ụka.
Ikwenye - guzosie ike dị ka akụ na onye nwere ike inye ụlọ ọrụ ahụ uru. Kụziere ndị mmadụ ihe, kesaa ọdịnaya a gwọrọ, ma mee ka ewebata ndị nwere nsogbu na ndị nwere nsogbu.
Ndị na-ege ntị - ugbu a ijikọrọ, oge eruola ka itolite, kwalite ma nwee obi ụtọ na ndị na-ege gị ntị ka ị nwee ike nwee mmekọrịta onwe onye na nke mmụọ.
Community - ndị na-ege ntị na-ege ntị, mana obodo na-ekwuchitere ha. Ihe dị nsọ nke mgbasa ozi n'ịntanetị bụ mgbe ndị na-ege gị ntị na-akwalite gị kama ịnwe ịrụ ọrụ niile.
Tinye nke a n'ikwu okwu n'ihu ọha ma chee ohere mgbe obodo gị ga-amalite ịchọ ọnụnọ gị na ihe omume ma ọ bụ kwado gị maka isi okwu na-esote gburugburu akụkụ!
Tags: espepekarl ahlrichsndị na-ekwu okwu mbansaikike dị n'ịntanetịonline ọnụnọnjirimara onweokwu ihu ọhammekọrịta mmadụ na ibe ya
Steeti Searchchọ Azụmaahịa na 2015